Home Wararka Ciyaaraha Maanta Sharuud lagu xiray heshiiska Sergio Aguero ee Manchester City
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inaysan haatan diyaar u aheyn inay qandaraas cusub u soo bandhigto Sergio Aguero .
Gooldhaliyaha kooxda ayaa kaliya sagaal kulan u saftay Citizens intii lagu jiray ololihii 2020-21, isagoo ku dhibtooday inuu si buuxda uga gudbo dhaawicii halista ahaa ee soo gaaray bishii June ee la soo dhaafay.
Aguero ayaa haatan ku jira go’doomin, ka dib markii xubin ka tirsan qoyskiisa laga helay cudurka coronavirus, taasoo la micno ah inuu mar kale maqnaan doono kulanka Crystal Palace habeenka Axadda.
32 jirkaan qandaraaska uu haatan ku joogo Etihad Stadium ayaa dhacaya dhamaadka bisha June, warbixin dhawaan soo baxday ayaa sheegtay in Barcelona ay xiiseyneyso inay kula soo wareegto si xor ah.
Sida laga soo xigtay The Mirror , madaxda City ayaa u cadeeyay Aguero inuu u baahan yahay inuu cadeeyo taam ahaanshihiisa isbuucyada soo socda si uu heshiis cusub ugu helo Etihad Stadium.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Paris Saint-Germain , iyo sidoo kale Barca, ay il gaar ah ku hayaan horumarada ku hareeraysan wiilka South America, kaasoo haatan xor u ah inuu la hadlo kooxaha ajaanibta ah.
Aguero ayaa dhaliyay kaliya labo gool heer kooxeed xilli ciyaareedkan laakiin waxa uu sameeyay 256 gool 379 kulan oo uu u saftay kooxda reer Manchester tan iyo markii uu ka yimid Atletico Madrid 2011.
Previous articleWararka Xanta Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee Saaka: Sharuud lagu xiray Heshiiska Sergio Aguero iyo Qodobo kale
Next articleMusharaxa madaxweynaha Barcelona Joan Laporta oo ka hadlay Joogitaanka Messi ee Kooxda